Ny onja voalohany an'ny Instant Apps dia ho avy tsy ho ela rehefa manomboka ny fitsapana | Androidsis
Ao amin'ny Windows PC dia manana ny safidintsika amin'ny programa azo alefa izay mamela antsika tsy hametraka azy ireo amin'ny solosaina akory, hany ka tsy maintsy atombohy amin'ny hitsin-dàlana izy ireo na tsindrio indroa eo amboniny. Ireo programa ireo dia mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa sasany ary misy fiatraikany lehibe hatrany satria afaka entina any amin'izay tiany izy ireo.
Iray amin'ireo endrika tsara indrindra amin'ny Google I / O tamin'ny taon-dasa io no Instant Apps, fomba vaovao handefasana rindranasa Android nefa tsy mila apetraka akory. Toy ny hoe mahatsapa isika fampiharana mivantana Tsy mila fametrahana izany ary, ohatra, toy ny nitranga tamin'ny fampisehoana, raha manindry ny rohy video Buzzfeed ianao, dia ho lalaovina ao amin'ny fampiharana raha misintona ireo ampahany ilaina amin'ny filalaovana ilay horonantsary.
Ny zava-mitranga dia tsy nandre isika avy amin'ireo Apps Instant tato anatin'ny volana lasa raha tsy efa nambara tamin'ny volana novambra fa akaiky ny famoahana izy ireo. Io no fotoana ahitantsika ny tenantsika ankehitriny. ny onja voalohany an'ny Instant Apps ho vonona amin'ny fisedrana voafetra, ao anatin'izany BuzzFeed, Periscope, Wish, ary Viki.
Ny zavatra mampihomehy dia ity fampiharana ity dia efa nisy hatramin'ny Android Jellybean, noho izy anisan'ny Google Play Services. Ny fampiharana efa misy dia tsy maintsy mizara ho modules hahafahan'izy ireo manomboka "on the fly" na "on the fly", ka SDK feno no ho hita mandritra ny volana vitsivitsy. Raha mpamorona antoko fahatelo ianao dia afaka midina amin'ny asa aman-draharaha ankehitriny avy amin'ity rohy ity mba hanohanana ny Instant Apps.
Izao fotsiny isika dia mila manantena fa afaka jereo ity fampiasa tsy ho ela ity ary andao hizaha toetra ny fahombiazany amin'ny fitsimbinana ireo megas amin'ny fahatsiarovana izay handeha amin'ny fifandraisana WiFi.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Manomboka mitsapa ny Instant Apps i Google
Sprint dia mandray 33% an'ny TIDAL